Raw Pramiracetam powder (68497-62-1) Vaiti - Phcoker
Pramiracetam powder is a synthetic racetam derivative for the purpose of cognitive enhancement ...
Unyanzvi: 1018 kg / mwedzi
Raw Pramiracetam powder (68497-62-1) video
Raw Pramiracetam powder (68497-62-1) Tsanangudzo
Raw Pramiracetam powder (inozivikanwawo sePramistar) inonzi cognitive enhancer (nootropic) inogadzirwa kubva piracetam, racetam yepakutanga, kuburikidza nekuisa boka reamide mu piracetam ne dipropan-2-ylamino ethyl boka. Izvi zvinotsigira Raja Pramiracetam yepamusoro kuti ive yakanyanya kupfuura piracetam.
Nzira dzeRaw Pramiracetam powder hadzizivikanwi, asi zvinoita sechinoshandura basa reEEG mumarangi ose akaedzwa (vaduku nevakuru) uye anogona kukwanisa kuwedzera hukama hwepamusoro hwecholine. Izvo zvakafanana nepiracetam uye mamwe marcetam mupfungwa yokuti nzira dzayo dzinoita sedzinoenderana nedzidzo dzomukati pamwe nemimwe migumisiro yechirwere, asi kunze kwekuti nzira dzisina kujekeswa zvakare.
Raw Pramiracetam powder (68497-62-1) Specifications
Product Name Raw Pramiracetam powder
Kemikari Name Amacetam, Raw Pramiracetam powderum
muchiso Name Remen (ParkeDavis)
Kirasi yeMishonga Anti-migraine agent
Molecular Formula C14H27N3O2
Molecular Wsere 269.38 g / mol
Kunyorera Point 47-48 ° C
Birara Point bp0.15 162-164 ° C
Biological Half-Life Panenge maawa 5
ruvara Makhristendi akachena
Skukodzera H2O: soluble10mg / mL, zvakajeka
APane Wedzera chiyeuchidzo uye kuwedzera kukwanisa kudzidza
mbishi Pramiracetam powder (68497-62-1) Tsanangudzo
Pramiracetam powder inonzi nervous system system stimulant uye nootropic agent anonzi racetam yemhuri yemishonga. Pramiracetam ndeimwe yeupfungwa hwakasimba kukurudzira nootropic inowanikwa, ndeye 5 kune nguva 30 inopfuura yakawanda kupfuura yehukama hwayo. Inogadziridza kutarisa, kufungisisa, nekuyeuka. Kusiyana nezvimwe zveimwe marcetam, pramiracetam yakaedzwa kune vanhu vakuru vane utano pane kungoisa pfungwa kune vakwegura avo vari kutotadza kukanganisa mano avo ekuziva. Kunyanya, pramiracetam inobatsira kukura chiyeuchidzo chenguva refu mumatambudziko aya.
Iyi nootropic inoshandawo seyouroprotective agent uye inogona kudzivirira kurasikirwa kwechirangaridzo uye huwandu hwekuziva kugadzikana.
Pramiracetam powder (68497-62-1) Mitiro weAtambo
Kungofanana nemakwikwi akawanda, uye chaizvoizvo nootropics, pramiracetam inokanganisa kusunungurwa kwemakemikari emakemikari, anonzi neurotransmitters, anobvumira kutumirwa kwezviratidzo pakati pemasero emagetsi. Asi, pramiracetam anoita zvinhu zvishoma zvakasiyana. Iyo haitauri zvakananga mimwe nzvimbo inonzi neurotransmitter receptor sites, iyo iyo inogona kunge iri kukurudzira mukugadzirwa uye kusunungurwa kweeurotransmitter iyoyo chaiye.
Pramiracetam anobatsira nekufungisisa zvakajeka. Pramiracetam inoshanda kuburikidza nekuwedzera yakashamwaridzana neColine mu hippocampus. Sezvo rombo ringava naro, Choline inoitika kuva mutsva wehutachiona hwemhepo hunonzi Acetylcholine, iyo inonyanya kukosha mukufungisisa nzira dzakadai sekufungisisa, kudzidza nekukurumidza uye nekuyeuka. Saka, chii chinonzi pramiracetam chinonyatsorongedza nzvimbo dze Acetylcholine, izvo zvinokurudzira basa rakawedzerwa mumukoko. Ichi chiitiko chinowedzera inovandudza kuumbwa kwezviitiko zvitsva uye kutaurwa kwevakwegura.
Applications of Pramiracetam powder (68497-62-1)
Pramiracetam powder yakagadzirwa naParke-Davis kare kumashure kwe1970s uye yepamutemo muUnited States mu1979. Kunyange zvazvo zvatove zvakanyatsodzidza sechirwere chezvinhu zvinorangarirwa zvinokonzerwa nekukuvara kweuropi uye zvirwere zvakadai seAlzheimer, panguva ino FDA haibvumiri iyo chero ipi zvayo inoshandiswa.
Izvozvo zvakati, pramiracetam yakaona kubudirira kukuru muEurope. Kutengeswa pasi pemazita ezita Neupramir, Pramistar, uye Remen, inowanzonyatsorongerwa kurapwa kwehutano hwemagariro ehutano soutementia, dyslexia, uye ADHD.
varumbidzwa Pramiracetam powder (68497-62-1) Dosage
Izvo zvakanakira kuenzanisa kubva kumunhu kusvika kune munhu, iyo inokurudzira pramiracetam mero ndeye 600mg-1200mg, iyo inokurudzira kugovera kuwandisa kwezuva nezuva kwemaviri kana matatu matatu, nokuti pramiracetam ine 5 kusvika 6 hafu yeupenyu hupenyu. Kunyanya zvakashata iwe wakaparadzanisa chiremba pamusoro pezuva racho, kunyanya kuenderana nehuwandu hweanotropic huchava muhutano hwako, uye zviri nani mugumisiro wese.
Zvidzidzo zvevanhu zviripo zvakashandiswa zuva rega rega kudya kwe 1200 mg ye pramiracetam, yakawanikwa iyo yose inoshanda uye yakanyatsorambidzwa uye inogona kunge yakanyatsotarisa pakutsvaga zvido zvehutano hwemunhu. Asi nguva dzose kuchenjera kutanga nechepasi-soro kunogona kuwanika mazai ezvo uye kugadzirisa zviyero sezvinodiwa.
Benefits of Pramiracetam powder (68497-62-1)
Kuwedzera Kwekucherechedza uye Kuwedzerwa Kudzidza Unyanzvi
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0)